प्रधानमन्त्री कसरी न्यायाधीश ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्री कसरी न्यायाधीश ?
फाल्गुन २३, २०७५ राधेश्याम अधिकारी
काठमाडौँ — रवीन्द्र अधिकारीको अनपेक्षित र असामयिक रूपमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । उहाँले नेकपाको माक्र हैन, मुलुककै आसलाग्दो राजनीतिक व्यत्तित्वको रूपमा उचाइ लिँदै हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा सँंगै बसेर काम गर्ने अवसर पाइयो । यस पटक म राष्ट्रियसभामा परेँ, उहाँ प्रतिनिधिसभामा जितेर आउनुभयो । संसदको हाताभित्र हामीबीच भलाकुसारी मात्र हैन, उहाँको मन्त्रालयमा भएका कामको मीमांसा पनि हुने गर्थ्यो ।
भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति सुनाउँदा उहाँ धेरै खुसी देखिनुहुन्थ्यो । उहाँको गृहनगर पोखराको थाती रहेको नयाँ विमानस्थलले पनि गति लिइरहेको थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई निजगढ विमानस्थल आफैले बनाउने होइन र ? भनी जिज्ञासा राख्दा ठूलो आयोजना भएकाले राष्ट्रिय बजेटमाथि ठूलो भार पर्ने हुँदा रणनीतिक साझेदार आवश्यक पर्छ भनी जवाफ दिनुभएको थियो ।
यसैबीच अनायास वाइड बडी विमान खरिदको चर्चा आयो । संसदीय समितिमा उहाँका केही भनाइ असत्य प्रमाणित भए । यसले मान्छेका मनमा केही भ्रम सिर्जना गर्‍यो । सायद उहाँको दुःखदायी रूपमा निधन नहुँदो हो त आउँदा दिनमा उहाँ स्वयं वास्तविकतासंँग जुध्नुहुन्थ्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको हुँ । वाइड बडी विमान खरिदमा अनियमितता भए/नभएको, भएको भए त्यसमा को–को संलग्न थिए ? उत्तर यसको छानबिन गरिरहेको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै जिम्मामा छाड्नु उचित हुन्छ ।
नेकपाको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवीन्द्रप्रति समवेदना प्रकट गर्ने क्रममा वाइड बडी खरिद प्रकरणमा रवीन्द्र निर्दोष रहेको ठोकुवा गर्नुभयो । रवीन्द्रबारे म पनि एक शुभचिन्तकको नाताले प्रधानमन्त्री साँचो ठहरिनुहोस् भन्ने नै चाहन्छु । तर म जान्दछु– यो मेरो रवीन्द्रसँंगको भावनात्मक सम्बन्धका कारण व्यक्त हुनपुगेको आग्रहयुक्त भनाइ हो ।
प्रधानमन्त्रीले समवेदना प्रकट गरिरहँदा निर्दोष भनेर सफाइ दिँदा रवीन्द्रप्रति गुन लगाउनुभयो वा बैगुन, यसको भने लेखाजोखा हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री विनोदप्रिय हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ । तर संवेदना व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको मुड विनोदी थियो भन्ने लाग्दैन । गम्भीर भएर नै उहाँले त्यो बोलेको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले एकसाथ तीनवटा गल्ती गर्न पुग्नुभयो, जसको उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री संसदको नेता हो । संसदप्रति उहाँ जवाफदेही हुनुहुन्छ । संसदीय उपसमिति हुँदै समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्छु भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न । संसदीय समिति अर्थात सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसलाई सम्बन्धित सरकार वा संस्थाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
प्रतिवेदन स्वयं अनियमितता, अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको कोटीमा परिवर्तन हुन्न । त्यसका लागि समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले काम गर्ने एउटा प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदनलाई सुरुमै चुनौती दिनुभयो, जुन संसदीय इतिहासमा उहाँले गरेको नकारात्मक कार्यको सूचीमा स्मरण गरिनेछ ।
दोस्रो, सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्न ४५ दिनमा प्रतिवेदन दिने अवधि तोकी न्यायिक आयोग गठन गर्‍यो । यसले दुइटा तथ्यलाई स्थापित गर्‍यो । पहिलो, वाइड बडी विमान खरिद छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने सरकारले स्वयं स्वीकार गर्‍यो ।
दोस्रो, सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोप प्रथम दृष्टिमा हेर्दा पनि परीक्षण गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्यो । तर सरकारको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– आफैले बनाएको आयोगबाट परीक्षण गराउनसमेत ऊ चुकेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई महत्त्व दिन चाहनु भएन, अर्कोतिर आफैले गठन गर्न लगाएको न्यायिक आयोगबाट पनि परीक्षण गराउन सक्नु भएन ।
तेस्रो, यी सबै पृष्ठभूमिमा यसै विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको छ । पछिल्लो पटक अर्को संसदीय समिति समक्ष आएर वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भए/नभएको विषयमा आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाउ आयोगका प्रमुख आयुक्तले दिइसकेको अवस्था छ । एकातिर आयोगले भ्रष्टाचार भए/नभएको छानबिन गर्ने र छानबिन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी पदमा आसीन प्रधानमन्क्रीले अमूक व्यत्ति निर्दोष छ भनेर भन्न मिल्छ ? सुहाउँछ ?
सत्तामा बस्दा लोलीमा बोली मिलाउने जति पनि पाइएलान् । निकटस्थहरूले राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भनी बचाउ पनि गर्लान् । स्वन्तत्र रूपमा आयोगले हेर्न सक्छ र आयोगलाई त्यसो गर्न कसले रोकेको छ भनी तर्क पनि गरिएला । तर कम्तीमा प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य जनझैं मनमा लागेको कुरा प्याट्ट भन्ने छुट छैन । प्रधानमन्क्री व्यत्तिमात्र हैन, यो स्वयंमा आफै संस्था हो भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अन्य विकसित मुलुकमा भए ‘न्यायमा अवरोध’ गरेको रूपमा बुझिन्थ्यो । अभिव्यक्ति दिएकै कारण प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहिरहन उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्नेसम्मको बहसमा जान्थ्यो । तर नेपालमा यो विषय केही पत्रपत्रिकाको सामान्य विषय बन्यो । चेतनशील पाठकहरूले बरु पाठक प्रतिक्रियामा तिखो गरी लेखेको देखेँ ।
कसैले लेखे/लेखेनन्, ध्यान दिए/दिएनन्– यो पनि उति साह्रो ठूलो कुरो भएन । तर संविधान घोषणा भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनुभएको छ । संविधान बमोजिम थिति बसाउने जिम्मा पनि उहाँको हो । यो राष्ट्रको उहाँ मूली हो । घरका सानाले बिराउँदा घरमूलीले सम्हाल्छन् । घरमूली नै सम्हालिएन भने सम्हाल्ने कसले हो ? राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएको प्रमुखको नाताले गल्ती गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने विभिन्न संवैधानिक अंग तथा निकायको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पर्छ । यस्तो अभिव्यक्तिका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सकसमा पर्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई त्यो संस्थाले बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न सक्छ । विवादको अन्तिम निर्णय हुने थलो भनेको न्यायपालिका हो । यस्तो भनाइले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्छ ।
यी सबै कुरा बेप्रसंग उठाइएको हैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एफबीआईका सेवानिवृत्त निर्देशक जेम्स कोमेको ‘अ हाइअर लोयल्टी’ पुस्तक सन् २०१८ मा प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा एफबीआई र अमेरिकी राज्यका संयन्त्र बीचको अन्तरसम्बन्ध व्याख्या गरिएको छ । एफबीआईको निर्देशक १० वर्षका लागि राष्ट्रफतिले नियुक्त गर्दारहेछन् । तर नियुत्तिपछि राष्ट्रपतिसंँग तिनको सोझो र प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदोरहेनछ । उनले राज्य संयन्क्रमा रहेका महान्यायधिवत्तासंँग मात्र सरोकार राख्दारहेछन् ।
पूर्व राष्ट्रफति बाराक ओवामाले नियुक्त गरेका जेम्स कोमेलाई नियुत्तिअघि ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा भेटेर भन्छन्, ‘एकचोटी तिमी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि हामी यसरी कुराकानी गर्न सक्तैनौं ।’ त्यसको व्याख्या गर्दै कोमे लेख्छन्, ‘विगत ४० वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने राष्ट्रपति र एफबीआईका निर्देशक निश्चित दूरीमा बसेर नै काम गर्छन् । एफबीआईको काम अक्सर राष्ट्रपतिका प्रमुख सहयोगीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यले राष्ट्रपतिको कार्यकालको मार्गमा असर पर्न सक्छ । संस्थालाई विश्वसनीय बनाइराख्न, वास्तविक र धारणागत दुवै रूपमा न एफबीआईले न यसका निर्देशकले नै राष्ट्रपतिसंँग नजिक रहन सक्छन् ।’
अमेरिकी अनुभवको अनुवाद कार्यरूपमा गर्न नेपालमा आवश्यक नहोला । त्यसो गर्न जरुरी पनि छैन । तर संविधानले खडा गरेका संस्थाहरूको विश्वसनीयता घट्न दिनु हुन्न भन्नेमा सचेत हुने कि नहुने ? यो प्रश्न भने हाम्रा हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको छ । यस्तो बेला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र हैन, संविधानले सिर्जना
गरेका सबै निकाय, संस्था कानुन बमोजिम चल्न पाउनुपर्छ । एउटाको अपमान अर्को संस्थाको मान बढ्ने कारण बन्दैन, बन्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले वाइड बडी विमान प्रकरणमा संसदको समितिको अपमान गर्नुभयो, काम गर्न नसक्ने न्यायिक आयोग गठन गर्नुभयो । त्यतिले नपुगेर स्व. रवीन्द्र अधिकारीको सम्झनामा गरिएको संवेदनशील अवसर छानेर मृत्युपश्चात निर्दोषिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
म पनि चाहन्छु, रवीन्द्र अधिकारीजस्ता व्यक्तिको वाइड बडी विमान खरिदमा कुनै अनुचित संलग्नता भएको देख्न नपरोस् । त्यतिमात्र किन ? म एक कदम अघि गएर भन्न तयार छु– वाइड बडी विमान खरिद नै रीतपूर्वक भएको होओस् । तर म के चाहन्नँ भने यस सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेपछि आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्र भएका संस्थाहरूले निर्विघ्नतापूर्वक काम गर्न पाऊन् । यसमा छानबिनकै क्रममा सफाइ दिने प्रधानमन्त्रीको उपक्रमलाई भने कसै गरे पनि उचित भन्न सकिँदैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०७:५७